किन फुत्किन्छन् विश्व सुन्दरी ऐश्वर्याको हातबाट फिल्म ? यस्तो छ कारण ! | mulkhabar.com
September 17, 2018 | 12:14 pm 261 Hits
एजेन्सी। अभिनेत्री तथा पूर्व विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या राय बच्चनलाई स्टारडमको रेसमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पनि फिल्ममा अभिनय गरिरहनु जरुरी छ । ४४ वर्षीया उनी लगतार फिल्ममा लागेमात्र आउँदा पुस्ताले उनलाई बिर्सन सक्दैनन् । तर, उनको हातबाट लगातार फिल्म फुत्किएपछि भावी पुस्ताले उनलाई बिर्सन समय नै लाग्दैन ।
२०१५ मा कम्ब्याक गरेकी उनलाई अहिलेसम्म पूर्ण सफलता मिलेको छैन । अझ यसभन्दा पनि ठूलो खबर त उनलाई निर्माता– निर्देशकले फिल्ममा लिने योजना नै बनाउन छाडिसके । ऐश्वर्याको हातबाट फिल्महरु फुत्किदैछन् । खबरका अनुसार ऐश्वर्या नै यसको प्रमुख कारण हुन् ।
विश्लेषकका अनुसार पछिल्लोसमय स्टारहरु स्वार्थी हुन्छन् । फिल्मको कथा भन्दा धेरै आफ्नो भूमिकामा ध्यान दिन्छन् । उनीहरुले आफू अनुरुप स्क्रिप्ट बदल्न चाहन्छन् । कहानीअनुसार नभएर आफ्नो रुप अनुसार फिल्मको स्क्रिप्ट बदल्दा ऐश्वर्याको हातबाट पनि फिल्म फुत्किएको विश्लेषकको भनाइ छ । उनले आफूसमक्ष आउने फिल्मलाई आफ्नो मर्जी अनुसार लेखाएकी थिइन् । र, उनको हातबाट फिल्म फुत्किएको हो ।
अगस्टको अन्त्यमा निर्माता शैलेश आर. सिंहद्वारा एक कहानीमा ऐश्वर्याको स्थानमा तापसी पन्नूलाई लिएको खबर आएको थियो । यस्तै सेप्टेम्बरमा दुई फिल्ममा ऐश्वर्याको स्थानमा अन्य दुई हिरोइनले मौका पाएका थिए । ‘वो कौन थी’ (१९६४) को रीमेकमा ऐश्वर्याको स्थानमा बिपाशालाई लिने खबर आएको छ । जबकि पछिल्लो वर्ष घोषणा गर्दै निर्माता श्रीनारायण सिंहको प्रोजेक्ट ‘जस्मीन’ मा ऐश्वर्यालाई हटाएर दुई नव–हिरोइनलाई लिने बताइएको छ ।
यी तीनै फिल्महरुको विश्लेषण गर्दा ऐश्वर्या स्क्रिप्टमा आफ्नै मनले परिवर्तन गराउछिन् । जसका कारण लेखक–निर्देशक खुशी हुदैनन् । एक–दुईपटक स्क्रिप्ट परिवर्तन पनि गरेर हेर तरपनि ऐश्वर्यालाई मन परेन । तब निमाण पक्षले ऐश्वर्याका साथ जानुभन्दा अरु नै कोही हिरोइनलाई आफ्नो फिल्ममा लिए । जानकारीका अनुसार ऐश्वर्यालाई राम्रो फिल्मको जरुरत त छ । तर, उनी आफ्नै कारण फिल्मबाट हात धुनु परिरहेको छ ।